आमिर खानकी छोरीको बोल्ड फोटो बन्यो एकाएक भाइरल (तस्बिरहरु) - Experience Best News from Nepal
सोम, मंसिर २३, २०७६
२मेस्सी रोनाल्डोमा विशिष्ट खेलाडीको मुद्धाको अन्त्य !! पेलेको तथ्यांकमा को उत्कृस्ट !!
५रोनाल्डो म्यानचेस्टर युनाइटेड जाने ?
६मड्रिडका यी १० खेलाडी जसले क्रिस्टियानो रोनाल्डो कै कारण मड्रिड छाडे !!
७अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्यामा रोनाल्डोको छलांङ्ग !! ६ गोलको जितमा रोनाल्डोको ९ औ ह्याट्रिक !!
८रोनाल्डोले किन चाडै फुटबलबाट सन्यास लिन सक्छन !!
आमिर खानकी छोरीको बोल्ड फोटो बन्यो एकाएक भाइरल (तस्बिरहरु)
प्रकाशित मिति : मङ्ल, अशोज ७, २०७६
बलिउड अभिनेता आमिर खानकी छोरी इरा खानले फिल्म उद्योगमा इन्ट्री गरिसकेकी छिन् । भलै उनले अभिनयको सट्टा निर्देशन चुनेकी छिन् । इराले आजभोलि एक सिरियल निर्देशन गरिरहेकी छिन् । यसका अलावा उनी मोडलिङ पनि गर्छिन् ।
इरा सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहने गर्छिन् । हालै इराले एक फोटोशूट गराएकी छिन् । उक्त तस्वीर उनले इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी छिन् । तस्वीरमा उनी खुबै बोल्ड देखिएकी छिन् । यो तस्वीरलाई लिएर भारतीय मिडियाले बलिउडका नायिकाहरुसँग तुलना गरेका छन् ।
फोटोमा इराले डार्क मेकअपका साथ रातो ड्रेस लाएकी छिन् । तस्वीर शेयर गर्दै उनले लेखेकी छिन्, सटर्डे नाइट भाइब । इरालाई अभिनय खासै मन पर्दैन । उनले फिल्म मेकिङलाई नै आफ्नो करिअर बनाउने निर्णय गरेकी छिन् । यसभन्दा पहिले इराले आफ्नो नाटक निर्माता सारिकासँग तस्वीर शेयर गरेकी थिइन् ।
बलिउड प्रवेश गर्नु अगाडी यस्तो पेशामा संलग्न थिइन् कबिर सिंहकी हट किएरा एड्भानी !!
जाडोमा पर्पल ‘बिकिनी’मा अदिति
इलियानालाई आफ्नो शरीरको बनावट बारे यति धेरै प्रफुलित !!
विकिनीमा ‘हरे राम’, बाणी माथि सामाजिक संजालमा ट्रोल !!
महिनाको ४०० रुपैयाँ लिएर फिल्ममा काम गर्थे सलमानका बुबा
आइल्याण्डको समुद्र किनारमा बोल्ड नेहा, (हेर्नुहोस् तस्वीरहरु)
कफीका पारखी तर चुरोट पिउदैनन् राजेश, आखिर किन !! जान्नुहोस
सेक्सी बन्नु अपराध भए मलाई पक्राउ गर : ज्योती मगर
हाम्रो पहिलो हाफ निकै राम्रो थियो तर एक रेड कार्डले सबै बदलियो : सार्री
नेपालको गौरबशाली जित, नेपाल फाइनलको नजिक
नेपाल २-१ माल्दिभ्स, नेपालको अग्रता !!
रोमान्चक पहिलो हाफ नेपाल र माल्दिभ्स बराबरीमा !!